पत्रकारको क्षमता विकासका लागि योजना बनाउछौँ : मन्त्री कार्की « Loktantrapost
[ Research Paper For Sale Online ]
[ How Can an Online Mobile Casino Work?
[ Slot Machine Online – A Fantastic Way to Win ]
[ How To Win At The Best Online Casino Games ]
[ सरकार र अदालत सट्टापट्टामा लागे : ओली ]
[ AVG Versus Avast – Exactly what are the Differences? ]
[ पत्रकार सन्तोष आचार्यको ‘रिडर्स गफ’ लोकार्पण ]
[ वैचारिक महासंकटमा काँग्रेस ]
[ चाडबाडमा धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्दै सहारा ]
[ दशैंको मुखमा सहाराको भत्ताले वृद्धवृद्धा र एकलको मुहारमा ल्यायो खुशी ]
[ प्रहरी जवान कार्की आफ्नै कोठामा मृत भेटिए ]
पत्रकारको क्षमता विकासका लागि योजना बनाउछौँ : मन्त्री कार्की
११ असार २०७८, शुक्रबार २२:१०
झापा, ११ असार । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पत्रकारको क्षमता विकासका लागि प्रदेश सरकारले विभिन्न योजना बनाएर अघि बढ्ने बताएका छन् ।
मिडिया एक्सन नेपाल प्रदेश एकद्धारा आयोजित कोभिड महामारी र पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि मिडिया संस्थाको भूमिका विषयक अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री कार्कीले पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले सक्ने सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
उनले मिडियाको विकासका लागि प्रदेश सरकारले सबैसंग सहकार्य गर्ने भन्दै मिडिया एक्सन नेपालसंग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताए । उनले कोरोना कहरको समयमा पत्रकारमा परेको आर्थिक समस्यालाई मध्यनजर गर्दै फेलोसिपको ब्यवस्था गरेर सहयोग गरेको बताए ।
प्रदेश–१ मा प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गरेर पत्रकारको क्षमता र दक्षता विकासका लागि पहल थालेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ । उनले पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने मिडिया विधेयकका सवालमा मिडिया एक्सन नेपालसंग परामर्श गर्ने बताए ।
मिडिया एक्सन नेपालका केन्द्रिय अध्यक्ष लक्ष्मणदत्त पन्तले पत्रकारको विषयमा मिडिया संवेदनशिल हुनुपर्ने बताए । उनले मिडिया संस्थाले सरकारसंगको परनिर्भरता हटाएर आत्मनिर्भर हुदैं पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा दक्षमता विकासमा ध्यान दिए मात्रै सञ्चार क्षेत्र सुदृढ हुने विश्वास ब्यक्त गरे ।
पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि मिडिया संस्थाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा अध्यक्ष पन्तले जोड दिए । उनले मिडिया स्वतन्त्र र निस्पक्ष नभए त्यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्ने भएकाले पत्रकारलाई दक्ष र जिम्मेवार बनाउनका साथै पत्रकारिताको विकासको क्षेत्रमा मिडिया एक्सन नेपालले लामो समयदेखि काम गर्दै आएको बताए ।
नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लीलाबल्भ घिमिरले पत्रकारको दक्षता र क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताए । उनले मिडिया एक्सन नेपालसंग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाए । पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि मिडिया संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गरे । सरकारसंगको परनिर्भरता हटाए मात्रै पत्रकारिता स्वतन्त्र हुने विचार ब्यक्त गरे ।
शिक्षा पत्रकार समूहकी प्रदेश संयोजक एवम् सञ्चारिक समूह प्रदेश १ की महासचिव राधा खनालले महिला पत्रकारको क्षमता विकासमा ध्यान दिन प्रदेश सरकार र पत्रकार महासंघको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले प्रदेश १ का महिला पत्रकारको अवस्थाको विषयमा चर्चा गर्दै महिला पत्रकारलाई सवल र सक्षम बनाउनु पर्नेमा जोड दिइन् । उनले अझै पनि महिला पत्रकार निर्णयक तहमा पुगि नसकेको भन्दैे पछिल्लो समय महिला पत्रकारहरु पनि विभिन्न अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेर आफैं उद्यमी बन्न थालेकाले प्रदेश सरकारले प्रोत्सहान गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ झापा शाखाका अध्यक्ष एकराज गिरीले कोभिड महामारीमा पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि मिडिया संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । उनले झापामा सञ्चार माध्यमहरुले नै पत्रकारको कोरोना बीमा गरिदिएको भन्दै पत्रकारको पेशागत सुरक्षाका लागि महासंघले पहल थालेको विचार ब्यक्त गरे । उनले पत्रकारलाई जिम्मेवार र दक्ष बनाउदै अघि बढाउन मिडिया एक्सन नेपाल जस्ता सञ्चार सम्बद्ध संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए । उनले प्रदेश सरकारले मिडियासंग सम्बन्धीत कानून निर्माण गर्दा सञ्चार मैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रादेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानका सदस्य गोपाल काफ्लेले पत्रकारलाई जिम्मेवार र दक्ष बनाउनका लागि प्रतिष्ठानले योजनाबद्ध ढङ्गबाट काम गर्ने बताए । उनले प्रदेश १ का पत्रकारको क्षमता विकासका लागि पहल गर्ने उल्लेख गरे । उनले मिडिया एक्सन नेपालसंग परामर्श गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता समेत जनाए ।
पछिल्लो समय सरकारसंगको परनिर्भरता बढ्दै गएकाले पत्रकारिता क्षेत्र स्वतन्त्र हुनेमा शंका उत्पन्न भएको मिडिया एक्सन नेपालका कार्यसमिति सदस्य आशिष मिश्रले बताए । कार्यक्रमको औचित्य माथि प्रकाश पार्दै उनले मिडियाको विकासका लागि मिडिया संस्था जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रको सञ्चालन प्रदेश १ संयोजक नरेन्द्र ढकालले गरेका थिए । हालसम्म ६ वटा प्रदेशमा वेबिनारबाट कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ ।
सरकार र अदालत सट्टापट्टामा लागे : ओली
।। अर्जुन कार्की ।। विर्तामोड, २८ असोज । निवर्तमान प्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले
पत्रकार सन्तोष आचार्यको ‘रिडर्स गफ’ लोकार्पण
विर्तामोड, २६ असोज । पत्रकार सन्तोष आचार्यको ‘रिडर्स गफ’ नामक कृति आज लोकार्पण भएको छ ।
वैचारिक महासंकटमा काँग्रेस
।। सन्दिप ओली ।। संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ का प्रमुख उपलब्धि हुन् ।
चाडबाडमा धमाधम सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाड्दै सहारा
मेचीनगर, २४ असोज । दशैँ, तिहार, छठ लगायतका पर्वहरु नजिकिएसँगै सहारा नेपाल साकोसले जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाहरुलाई
दशैंको मुखमा सहाराको भत्ताले वृद्धवृद्धा र एकलको मुहारमा ल्यायो खुशी
विर्तामोड, २४ असोज । सहारा नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले दशैको मुखमा वृद्धवृद्धा र एकलको मुहारमा खुशी
प्रहरी जवान कार्की आफ्नै कोठामा मृत भेटिए
भद्रपुर, २३ असोज । भद्रपुरमा एक प्रहरी जवान आफ्नै कोठामा मृत अवस्थामा फेला परेका छन् ।